Argentina Oo Guul Gaartay Iyo Uruguay Oo La Garaacay Isreebreebka Koobka Adduunka 2014. - jornalizem
Argentina Oo Guul Gaartay Iyo Uruguay Oo La Garaacay Isreebreebka Koobka Adduunka 2014.
Xulka Argentina ayaa sii waday rikoorkooda fiican ee 2012 ka dib markii ay 3-1 ku dubteen xulka Paraguay, waxaana ay natiijadaas u qaaday meesha ugu sareysa ee kala sareynta isreebreebka xulalka Latin America ee koobka adduunka, iyagoo ka saramay xulalka ay aadka isagu dhow yihiin ee Chile iyo Ecuador.
Angel Di Maria, Gonzalo Higuain iyo Lionel Messi ayaana dhamaantood dhaqbaqa u soo taabtay xulka Albiceleste kuwaasoo guul raaxo leh gaaray, halka goolka kaliya ee Paraguay uu ku yimid rigoore uu dhaliyay Jonathan Fabbro.
Xulka Uruguay oo guuldarro 4-0 ay ka soo gaartay Colombia, ayaa Argentina u sahashay inay garoonka ku soo galaan iyagoo ka warqaba in guul ay gaaraan ay u direysa halka ugu sareeysa ee kala sareynta isreebreebka koobka adduunka ee Latin America.
Radamel Falcao oo shabaqa laga celin la’ yahay ayaana xulkii Colombia hogaanka u dhiibay kulankii ay la ciyaarayeen Uruguay, waxaana labo gool kale u sii dhaliyay Gutiérrez, ka hor inta uusan Zuniga ciyaarta ku soo afmeerin goolkii afaraad.
Xulka Ecaudor waxa ay 1-0 ku suuldaartay xulka Bolivia.